Biodiversity Vision - Biodiversity Extinction SO
Kala duwanaanshaha noolaha waxaa loola jeedaa tirada iyo noocyada noocyada ee aan adduun ahaan ku haysanno iyo weliba deegaan ahaan. Tan waxaa ka mid ah xayawaanka, dhirta, fangaska, bakteeriyada iyo algae.
Sababo la xiriira ficillada mans noolaha noolaha ayaa si dhakhso ah hoos ugu dhacaya adduunka oo dhan, si aad u badan ayaa laga yaabaa inuu u tixgeliyo inay tahay dhacdo baabi'in ballaaran. Dhacdadii ugu caansanayd ee baabi'inta ugu weyni waxay ahayd markii loo yaqaanno diinosaur. Waxaa lagu doodi karaa in noolaha noolaha ahi ugu dambeyntii u soo ceshan doono qaab ama mid la mid ah sidii ay yeelaysay ka dib ciribtirka daroogada, laakiin tani waxay qaadan kartaa waqti aad u dheer oo aan suurtagal ahayn ka hor inta noocyada bini'aadamka laftiisu ay bakhtiyeen.
Waxaan ku leenahay jiilalkayaga mustaqbalka si loo joojiyo hoos u dhaca deg degga ah ee noolaha. Adduunyo aan noolahaha lahayn waa caajis waxaana laga yaabaa xitaa inay halis galiso jiritaankeena. Waa lagu doodi karaa in Coronavirus Covid19 Faafida ay ka dhalan karto ku xad-gudubka noocan ah ee weligeen sii kordhaya.
Waqtiga xaadirka ah waxaa jira hoos u dhac deg deg ah ee qaababka nolosha badankood. Habitat qaadata waqti dheer si loo soo kabsado ayaa lumay. Kala duwanaanshaha shimbiraha, kalluunka, digaagga iyo xayawaannada kaleba si dhakhso leh ayay hoos ugu dhacayaan. Isla sidaas ayaa loo dhihi karaa kala duwanaanta dhirta iyo xayawaanka kaladuwan, oo ay ku jiraan xayawaannada hoyga ah iyo xitaa xayawaanka guryaha lagu haysto.
Dhawaan waxaa si weyn diirada loo saaray isbadalka cimilada. Si kastaba ha noqotee, marka laga tago dhammaan hadalka iyo teknoolojiyad cusub oo loo adeegsado adeegsiga wanaagsan gaar ahaan si loo dhaliyo quwad, guud ahaan adduunka isku darka isticmaalka shidaalka kaarboonka ayaan hoos u dhicin sidaa darteedna dagaalka aan kula jirno isbedelka cimilada ayaan lagu guuleysan. Hal sabab oo tan ah ayaa ah in meerayaasha guud ahaanba dadku ay sii kordhayaan isla markaana isticmaalka qof walba uu kordhayo.
Isbedelka Cimilada ayaa ka mid ah sababaha saameeya kaladuwanaanta noocyada. Markii aan wajahayno dagaalka furfuran ee ka dhanka ah isbedelka cimilada waxaan si ba'an ugu baahanahay Qorshe B ama uguyaraan talaabooyin kale oo dheeri ah oo lagu ilaalinayo noolaha. Taasi waa mawduucayaga.
Waxaa jira ururo kale oo ka baxsan halkaas kuwaas oo qabanaya shaqo wanaagsan, dagaalada qaar waa lagu guuleystaa laakiin dagaalka ka dhanka ah luminta noolaha ayaa la luminayaa. Waxaan rabnaa inaan badalno taas.
si loo tuso siyaasiyiinta inay dadku rabaan natiijooyin dhab ah iyo
si ay ula shaqeeyaan saynisyahano iyo ururada kale si wax looga qabto lumitaanka noolaha noolaha.
Waad naga caawin kartaa inaan aragtidayadu run ka dhigno adigoo faafinaya erayga. Taasi waa iyada oo la wadaagayo isku xirkayaga iyo ku dhiirrigelinta dadka in ay muujiyaan taageeradooda iyaga oo ku biiri doona (xitaa haddii taasi ay tahay waxa kaliya oo ay sameeyaan) iyo / ama tabaruc iyo / ama tabaruc.